Akhriso; Warsaxaafadeed uu ka soo saaray James Swan kulan uu la yeeshay Madaxweynaha Somaliland | Jowhar Somali news Leader
Home News Akhriso; Warsaxaafadeed uu ka soo saaray James Swan kulan uu la yeeshay...
Akhriso; Warsaxaafadeed uu ka soo saaray James Swan kulan uu la yeeshay Madaxweynaha Somaliland
Wakiilka gaarka ah ee Xoghayaha Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan oo booqasho ku tegey magaalada Hargeysa ayaa kula kulmay Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi.
Kulanka ayaa diirradda lagu saaray arrimo dhowr ah oo salka ku haya xiriirka wada-shaqayneed ee Somaliland iyo qaramada midoobay u dhexeeya iyo dareenka ay Somaliland ka qabto kaalinta ay qaramada midoobay iyo beesha caalamkuba kaga jiraan horumarka Somaliland,wadahadalada dowlada federalka iyo maamulka Somaliland,arrimaha doorashooyinka Somaliland.
War saxaafadeed uu soo saaray James Swan ayaa u qornaa sidan;
Subax wanaagsan iyo Sannad Wacan oo Wanaagsan dhammaantiin.
Waxaan dhiirigelineynaa in si dhakhso leh horumar looga gaaro dhameystirka tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah Somaliland si loo qabto doorashooyinka baarlamaanka 2020ka. Waxaan soo dhoweyneynaa wada-xaajoodka u dhexeeya xisbiyada waxaanna ku boorinaynaa in la dhaqan-galiyo heshiisyadii dhowaan la gaaray kuwaas oo suurto gelinaya u diraar garowga doorashooyin dhaca 2020ka. Waxaan ugu baaqaynaa mas’uuliyiinta Somaliland inay xaqiijiyaan xurmaynta xorriyadda hadalka iyo isu imaatinka, iyo sidoo kale awoodda ay xisbiyadu u leeyihiin abaabulka iyo hawlgalka. Jawiga siyaasadeed ee noocaas ah wuxuu muhiim u yahay in la helo geedi-socod lagu kalsoonaan karo.
Waxaan hoosta ka xariiqnay dadaalladii wanaagsanaa ee dhowaan wax looga qabtay khilaafaadka daba-dheeraaday ee ka taagnaa Sool iyo Sanaag – oo ay ku jiraan dadaalladii lagu dhaqaaqay wixii ka dambeeyay dagaalkii Tukaraq ee 2018 – iyada oo loo maray wadahadal iyo hab wax ku ool ah oo lagu yareynayo xiisadaha laguna dhimayo halista colaado intaas ka badan. Waxaan ku boorinaynaa in dadaalladaas la sii joogteeyo oo lasii xoojiyo.
Waxaa naga go’an inaan sii wadno wadashaqeynta Qaramada Midoobay ay la leedahay Somaliland iyo barnaamijyadeenna faraha badan ee lagu taageerayo dadkeeda. Iyadoo 16 xafiis, hay’ado, sanduuqyo, iyo barnaamijoy Qaramada Midoobay leedahay ay ka hawl-galaan Somaliland, ayaa taageeradeenu waxay iskugu jirtaa qaybo ballaaran oo xagga maamulka dowliga ah, amniga, horumarka, iyo barnaamijyada samafalka ah. Tusaale ahaan, shaqada QM waxaa ka mid ah taageeridda dugsiyada dhexe, qalabaynta iyo xirfad-dhisidda macallimiinta si ay u bixiyaan waxbarasho aasaasi ah oo tayo wanaagsan.
Waxaan gargaar u fidinnaa dadka barakacayaasha ah iyo qaxootiyada ku nool Somaliland, ee kasoo cararay colaadaha ka jiro meelaha kale ama abaaro ay ku khasbeen inay kasoo tagaan deegaanadoodii. Waxaan taageernaa nidaamyada sarreynta sharciga, booliska iyo garsoorka. Hawlaha QM wey noocyo badanyihiin, laakiin waxay ka mideysanyihiin ujeedkooda oo ah in is-bedel wax ku ool ah oo wanaagsan ay helaan dadka iyo adeegyada dad weynaha ee Somaliland.